Dhaamsa Dr Maraara Qeerroo Hundaaf Guyyaa hardhaa - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDhaamsa Dr Maraara Qeerroo Hundaaf Guyyaa hardhaa
Dhaamsa Dr Maraara Qeerroo Hundaaf Guyyaa hardhaa
Dhaamsa Dr Maraara Qeerroo Hundaaf Guyyaa hardhaa Yeroo Qeerroon Magaala Shaashe isaan bira deemanit dabarsani .
Ijaarama , Saba ijaarametu laga Ce’a
Sirba hin barbaachifne hin Sirbina
Sooda barbachifne hin Sodatina
Tokkoomma , saba Tokkometu laga ce’a
Magaala Nageelle Arsiitti qeerroon bifa kanaan gootota aanicharra Diinan hidhamanii hiraarfamaa,dararamaa turan mana hidhaatii gad lakkifamuu isaani ilaalchisee simannaa taasisaniif. Kan haasaa godhaaru Dargaaggoo Taarikuu_Kadiir
Kan uffata Aada uffate video irratti haasawu sun Faranjoo Bushuraat lamaan isaanituu hidhaa qilintorraa guyyaa dheengaddaa gad lakkiifamaniiruu.
Baga Rabbi harka diinaati isin baase. Qeerroon Aanaa Nageellee Arsii Galatoomaa.
Via: Keebeek Shaffilaà
Osoo OPDOn Lammaa Magarsaa tokkichuma kosii keessaa isaan baase nyaachuuf albee qaratuun busy taatee jirtuu, Wayyaaneen magaazii guddichaan itti gadi teechee jirti. Koreen Komand Poostii
– Haylamaaram Dassaalany ( Mummmicha Ministeeraa)
– Dammaqaa Mokonnon ( Itti Aanaa MM)
– Saamoraa Yunus ( Ajajaa Waraanaa)
– Siraaj Fargeessaa ( Ministeera Ittisaa)
– Geetachoo Asaffaa ( I/G Basaasaa)
– Asaffaa Abbiyyuu ( Poolisii Federaalaa)
Hub 1: Komaandi poostii duraanii keessatti pirazidantiin, ajajaan poolisiifi Itti gaafatamaan nageenyaa naannolee jeequmsi keessatti uumamee koree komaand poostii federaalaa kana keessatti hammatamu ture. Amma keessaa baasaanii jiru.
Hub 2: Muumichi Ministeera akkuma beknu maqaan malee qabataamn hojii dhiisee jira. Itti aanaanis ( Dammaqaan) aangoo paartii ANDM keessaa kaafamuun waan hin oolle. Kana jechuun Komaandi Poostii tana Saamoraafi Geetachootu oofa.